Fampianarana Wordpress 10 maimaim-poana mety tsara ho an'ny vao manomboka | Famoronana an-tserasera
Fampianarana WordPress 10 maimaim-poana mety tsara ho an'ny vao manomboka
Melisa Perrotta | | Graphic Design, Famolavolana tranonkala, Wordpress
Mitombo hatrany ny sehatra famoronana votoaty WordPress ary mihamaro hatrany ny mpanjifa liana amin'ny fampiasana an'ity haino aman-jery ity hamoronana ny tranonkalany. Amin'io lafiny io dia lasa a ny famolavolana lohahevitra WordPress asa tena mahasoa ho an'ny mpamoronamiaraka amin'ny 26% amin'ny tsena.
Androany dia tsy ampiasain'ny mpamorona sy ny bilaogera fotsiny izy io fa izay te-hanana fisian'ny eo amin'ny tsena an-tserasera Noho io antony io dia fotoana mety indrindra hianaran'ny mpamorona hifehezana ity fitaovana ity.
Koa satria be loatra ny fangatahana matihanina voaofana, dia tianay ny manampy anao hanararaotra izany fotoana izany; ary izany no antony nananganana tutorial tsara indrindra 10 ho an'ireo izay manomboka mianatra.
Raha hitsidika ny tranokala na hahita ny tutorial feno dia kitiho fotsiny ny lohateny.
1 Tutorial avy amin'ny rangotra ho an'ny vao manomboka
2 Tutorial WordPress amin'ny dingana 7
3 Mamorona lohahevitra WordPress mamaly amin'ny fampiasana HTML 5
4 Torolàlana feno hamoronana pejin-tranonkala ao amin'ny WordPress
5 Fanampiana amin'ny olana amin'ny WordPress
6 Mamorona lohahevitra WordPress amin'ny voalohany
7 Ahoana ny fametrahana lohahevitra ao amin'ny WordPress
8 Mazava ho azy master famoronana lohahevitra WordPress
9 Fanalahidy hisafidianana modely tsara indrindra
10 Fahadisoana fahita matetika
Tutorial avy amin'ny rangotra ho an'ny vao manomboka
Tutorial izay manazava tsikelikely ny fomba famoronana ny tranokalanao amin'ny WordPress. Mampivelatra hevitra fototra sy lohahevitra manokana mifandraika amin'ny teknika. Izy io koa dia manazava momba ny Plugins, ny configurations mandroso ary ny konsep manokana hafa. Tsidiho ny pejy haka ny Mazava ho azy fa feno.
Tutorial WordPress amin'ny dingana 7
Este tutorial manokana ho an'ny mpianatra fifandraisana Manazava ireo hevitra mifandraika amin'ny WordPress izy io amin'ny voalohany. Manomboka amin'ny fanavahana ny kinova roa amin'ny WordPress, mampivelatra ny foto-kevitry ny lohahevitra, mpampiasa ary singa. taty aoriana manazava ny fomba famoronana tranokala amin'ny dingana fito mandroso tsara.
Mamorona lohahevitra WordPress mamaly amin'ny fampiasana HTML 5
Torolàlana izay manazava ny fomba famoronana lohahevitra mamaly amin'ny WordPress amin'ny fampiasana HTML5. Ho an'ireo izay efa nanana fahalalana taloha momba ny fandaharana HTML ary mitady hampifanaraka ny endriny amin'ny WordPress; Na tsotra ho an'ireo izay te-hamorona ny tranokalany WordPress amin'ny antsipiriany bebe kokoa.
Torolàlana feno hamoronana pejin-tranonkala ao amin'ny WordPress
Ao amin'ity boky torolalana ity, Javier Blacázar dia manazava amin'ny antsipiriany ny fomba famoronana tranokala iray amin'ny WordPress. Ny fampianarana dia nohavaozina tamin'ity taona ity ary misy toro-hevitra miainga amin'ny fomba hisafidianana ny maodely tsara indrindra ka hatramin'ny fomba fikirana widgets.
Fanampiana amin'ny olana amin'ny WordPress
Ity lahatsoratra ity dia manazava ny fomba fiasan'izy io amin'ny fomba mahazatra, mifantoka manokana amin'ny olana manokana ananan'ny mpampiasa. Mety indrindra amin'ny famaliana ireo fanontaniana mipoitra mandritra ny fananganana ilay tranonkala.
Mamorona lohahevitra WordPress amin'ny voalohany
Ao amin'ity torolàlana ity dia manazava ny fomba famoronana lohahevitra WordPress hatrany am-piandohana i Pablo Lopez. Ho an'izany manazava inona ny fiheverana tokony horaisina teo aloha sy ny antsipiriany momba ny fomba fanoratana ny lohahevitra. Izy koa dia mamolavola foto-kevitra toy ny Loop ary mamela / manaisotra hetsika.
Ahoana ny fametrahana lohahevitra ao amin'ny WordPress
Ao amin'ity lesona fohy ity dia mampianatra antsika i Josep avy amin'ny WebsiteToolTester.com ny fomba fametrahana lohahevitra vaovao ny WorPress mora sy haingana.
Mazava ho azy master famoronana lohahevitra WordPress
Ity fampianarana video ity dia a Mazava ho azy fa famoronana modely WordPress namolavola horonan-tsary 12 mihoatra ny faharetan'ny 10 minitra. Tena feno, mora azo ary maimaimpoana tanteraka!
Fanalahidy hisafidianana modely tsara indrindra
Eto ianao dia hahita toro-hevitra 10 tsara tokony harahina rehefa misafidy modely vaovao ho an'ny fametrahana WordPress anao irery, avy amin'ny famolavolana mampifanaraka, ny safidy amina endrika ary ny fitaovana mandroso indrindra.
Fahadisoana fahita matetika
Miaraka amin'ity lahatsoratra ity manazava ny Aula Media izay lesoka mahazatra indrindra mitranga rehefa miasa ao amin'ny WordPress. Mendrika ny hijerena azy io ary hialana amin'ireo olana ireo mialoha!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » Wordpress » Fampianarana WordPress 10 maimaim-poana mety tsara ho an'ny vao manomboka
Zavakanto Felipe Pantone tsy misy fika sy tsy mahomby